'पायल्स भनेर बस्दा क्यान्सर पनि हुन सक्छ' | Ratopati
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख १६, २०७६ chat_bubble_outline2
नेपालमा पायल्स, मलासयको क्यान्सर र ठूलो आन्द्राको क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या धेरै छ । मलासय र ठूलो आन्द्राको क्यान्सर (कोलोरेक्टल क्यान्सर) रोगीको सङ्ख्या विश्वमा गत वर्ष १८ लाख भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । तर नेपालमा भने त्यस्ता रोगी यति नै छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
चर्चित सर्जन डा. एसके भट्टाचार्य र गायिका नुपुर भट्टाचार्यका छोरा हुन् डा. सत्यद्वीप भट्टाचार्य । काठमाडौंमै जन्मे हुर्केका भट्टाचार्यले धरान मेडिकल कलेजबाट २००५ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरे । त्यसको लगत्तै १ वर्ष वीर अस्पतालमा काम गरे । २००७ मा अमेरिका गएका भट्टाचार्यले अमेरिकाको टफ्ट्स युनिभर्सिटीअन्तर्गत बोस्टनको सेन्ट एलिजावेथ मेडिकल सेन्टरबाट जनरल सर्जरीमा पोस्ट ग्र्याजुएसन गरे ।
अमेरिकाकै ब्राउन युनिभर्सिटीबाट कोलोरेक्टल सर्जरीमा ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’ गरेका डा. भट्टाचार्यले इलिनोइसमा कोलोरेक्टल तथा जनरल सर्जनको रूपमा ५ वर्ष काम गरे ।
विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञानको सदुपयोग स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित २०१८ मा नेपाल फर्किएका डा. भट्टाचार्य काठमाडौँको नर्भिक अस्पताल, ललितपुरस्थित निदान अस्पताल र नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट कोलोरेक्टल तथा जनरल सर्जनका रूपमा कार्यरत छन् । विकसित मुलुकका उपचार पद्धति स्वदेशमै उपलब्ध भएकाले उपचारका लागि अब विदेश धाइरहनु नपर्ने बताउने कन्सल्टेन्ट कोलोरेक्टल तथा जनरल सर्जन डा. सत्यद्वीप भट्टाचार्यसँग रातोपाटीका लागि टुना भट्टले गरेको कुराकानी ।
पायल्स दुई प्रकारका हुन्छन्, एक हाम्रो शरीरको (मलद्वारको) भित्री भागमा हुन्छ, जसलाई आन्तरिक (इन्टरनल) पायल्स भनिन्छ । अर्को मलद्वारको बाहिरी भागमा, मलद्वारको छालामुनि रहेको हुन्छ यसलाई बाहिरी (एक्स्टर्नल) पायल्स भनिन्छ ।
त्यसैगरी, बाहिरी पायल्स सुन्निन सक्छ र दुख्न सक्छ । उक्त ठाउँमा धेरै बल परेमा वा अन्य कुनै कारणले पनि त्यो भाग सुन्निन सक्छ र दुख्ने पनि हुन्छ । कहिले काहीँ मलद्वारको बाहिरी भागमा सुन्निएको मासुमा रगत जम्ने र दुख्ने हुन्छ । कतिलाई समस्या भएको दुखेपछि वा रगत निस्केपछि मात्र थाहा हुन सक्छ ।
हामीले खान नहुने भन्ने केही पनि छैन तर ती सबै के हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक छन् त ? त्यति अड्कल गर्न सक्ने हो भने स्वास्थ्य बिग्रदैन। आफ्नो शरीरलाई कति आवश्यक छ भन्ने त आफैलाई थाहा हुने कुरा भयो । त्यसैले खानपानमा ध्यान दियो भने समस्या आउँदैन ।
रातो मासु, बोसोयुक्त खानेकुराहरुको प्रयोग कम गर्नुपर्छकम गर्नुपर्छ। एक पटक समस्या भोगी सकेपछि शरीरलाई असर गर्ने खाना फेरि दोहोर्याएर किन खाने ?
त्यसैगरी, अर्को कस्तो केस आयो भने आयुर्वेदमा उपचार गर्न गयो तर प्रेस्किप्सन हेर्दा औषधि दिएको छ एलोपेथिकको एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड । आयुर्वेद भने पछि त आयुर्वेदिक औषधिबाट उपचार हुनुपर्ने हो तर यो त आयुर्वेदको नाममा नन–आयुर्वेद उपचार भयो । यसले बिरामीलाई त न्याय गरेन नि ।
केही समयअघि रोटरी क्लबको सहयोगमा ठूलो आन्द्रा र मलासय क्यान्सरबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम अनि अन्तक्र्रिया गर्यौँ, जसमा १ सयभन्दा धेरै सहभागी भए । यस्तै गरेर भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्नेछौँ ।
May 1, 2019, 6:32 a.m. Kamal Phuyal
मलाइ दिशा पटक पटक लागि रहन्छ । दिनम ५/६ पटकनै, तर दिशा बस्दा समस्या चै केही पनि हुदैन । अनि केही समय देखि मेरो मलद्वार नजिकैको शरिरको तल्लो भागको हड्डी दुखिरहेको छ । अर्थोपेडिक्स सङ्ग कन्सल्ट गर्दा यो सामान्य दुखाइ हो भनेर केही औषधि दिनुभयो । तर मेरो दुखाइ कम भएको छैन । के पायल्स भएम यस्तो हुन्छ ? वा अन्य के कारण हुन सक्छ ?
April 29, 2019, 11 a.m. RAM KRISHNA KARKI
ramro ra mananiya lekh rahechha. yes le malai pabahit banyo, aru pani yes anusar padhera jankar bhaee swastha parti sajag rahau.